I-China Structural Ceramic Component, I-Ceramics Yokwakhiwa, i-High Precision Structural Ceramic Component, i-Zirconia Ceramic Structural Component, Isakhiwo Sokwakheka Kwe-Ceramic Part Type Supplier
Jinghui Industry Ltd. [Hunan,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Amakethe Omkhulu: Americas , Asia , Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:ISO9001, FDA Incazelo:I-Structural Ceramic Component,I-High Precision Structural Ceramic Component,I-Zirconia I-Ceramic Structural Component,Uhlobo lwengxenye yesakhiwo seCoramic Component,Izakhiwo zeCeramics,
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component
Izigaba zomkhiqizo we- I-Structural Ceramic Component , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, I-Structural Ceramic Component , I-High Precision Structural Ceramic Component abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- I-Zirconia I-Ceramic Structural Component R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
Ingalo ka-99.5% ye-alumina ye-robot ingalo
I-95% i-alumium oxide isikhonkwane somhlahlandlela we-ceramic
99.5% umhlangano we-alumina ceramic Yenziwe ngamaphesenti angu-99.5% aluminium oxide. Ngomshini owomile owenziwe ngomshini wokukhiqiza umshini wokukhipha umklamo we-ceramic, bese uqeda ngqo umshini kanye nomshini isigaba sefreyimu ukuba kube ukucaciswa kokugcina. Siyakwazi ukukhiqiza yonke imiklamo ehlukile noma...
Siyakwazi ukunikeza izinhlobo eziningi ze-robot yangaphambili ye-robot engxenyeni ye-99.5% ye-aluminium oxide ceramics, noma ukuhlanzeka okuphakeme. Ingalo ye-Alumina yeceramic inenzuzo ecacile uma iqhathaniswa nezensimbi, ezifana nokugqoka okukhulu ukugqoka, ukugxila okukhulu kakhulu, ukuphakama okuphezulu okushisa...
Ngokuthuthukiswa kwemboni yanamuhla, ibhuloho elingenalutho ensimbi alikwazi ukufeza indima yabo kahle, ikakhulukazi ekushiseni okunamandla nokugqoka okukhulu ukupakisha. Kodwa izinto eziphambili ze-ceramic zinezici ezimangalisayo zokusebenza kumadivayisi asebenza ngaphansi kwalezi zimo ezinzima. Siyakwazi ukukhiqiza...
Le phini yomhlahlandlela we-ceramic yenziwa nge-95% alumina ethandwa kakhulu ngezinto ezithuthukile ze-ceramic enkundleni. Idume ngamandla abo kagesi, e-mehendi, ukumelana nokushisa okuphezulu nokuncintisana okukhulu. Sivame ukusebenzisa ukucindezela okwomile, inqubo yokubumba umjovo we-ceramic njengendlela yokwenza...
Yenziwe ngamaphesenti angu-99.5% aluminium oxide. Ngokuvamile sisebenzisa umshini oshisayo wokukhipha umshini wokukhipha umshini we-ceramic umgudu wokuthola ibha ye-ceramic eluhlaza, bese uhamba kahle ngokugaya phezulu ukuze uthole ibha yomshini oqedile kakhulu. Siyakwazi ukukhiqiza yonke imiklamo ehlukene noma...
Lokhu ku-99.5% kwe-aluminium oxide ye-ceramic ring eyenziwe ngokucindezela okomile, bese uthola umzimba omncane kakhulu we-ceramic ngaphandle kwama-pores ngaphakathi kwawo. Ukuze uhlangabezane nokusetshenziselwa okusemthethweni komhlangano, kudingeka ukugaya nokugaya okwesibhakabhaka, ukubekezelelana komzimba...
Ngomshini owomile owenziwe ngomshini wokukhiqiza umshini wokukhipha umklamo we-ceramic, bese uqeda ngqo umshini kanye nomshini isigaba sefreyimu ukuba kube ukucaciswa kokugcina. I-Alumina support ceramic support, Yenziwe ngamaphesenti angu-99.5% aluminium oxide. Siyakwazi ukukhiqiza yonke imiklamo ehlukile noma...
Sivame ukukhiqiza isikhunta se-ceramic iminyaka eminingi, ikakhulukazi izinto ezisetshenzisiwe esasisetshenziswa yi-aluminium oxide ceramics kanye ne-zirconia ceramics. Ngomshini wokushisa oshisayo noma indlela yokukhiqiza umjovo wokuklamba ukuze uthole isisindo se-ceramic. Siyakwazi ukukhiqiza ama-ceramic screw...
I-China I-Structural Ceramic Component Abahlinzeki
Njengempahla emihle yomzimba ka-ceramic, izakhi ze-ceramic zakhiwe kabanzi emishinini eminingi ehlukene, imishini ebuhleni bezinsimu ezahlukeneyo. Zisebenza njengengxenye yokusekela, ingxenye yokuxhuma, i-terminal insulator, umzimba we-ceramic, igobolondo le-ceramic, i-eleferensi ye- electronic ceramic , amathuluzi wobunjiniyela njalonjalo.
Sinikeza ubuciko bezinga eliphakeme lokucubungula ngekheramik ngokusekelwe emishini yethu yokukhiqiza okucacile ephezulu kanye namathuluzi okuhlola.
I-Structural Ceramic Component I-High Precision Structural Ceramic Component I-Zirconia I-Ceramic Structural Component Uhlobo lwengxenye yesakhiwo seCoramic Component Izakhiwo zeCeramics I-Textile Ceramic Component Ignitor Ceramic Component